ကားရဲ.ဦးနှောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » ကားရဲ.ဦးနှောက်
Posted by TT on Oct 12, 2012 in How To.., Know-How, DIY |7comments
မော်တော်ကားဆိုသည်မှာ စတင်တီထွင်ကာစက စက်မှုနည်းပညာပစ္စည်းသီးသန့်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ခေတ်မှီနည်းပညာ ပေါင်းစုံထည့်သွင်း အသုံးပြုထားသော လူ့အသုံးအဆောင် တစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။(Mechanical, Electrical,Electronic, IT, GPS, Multimedia စသည်ဖြင့်)
ကားတွင်အသုံးပြုထားသည့် များပြားလှသော နည်းပညာများအနက်မှ အရေးကြီးဆုံး ပစ္စည်းကိရိယာ တစ်ခုအကြောင်း မိတ်ဆက်တင်ပြပါမည်။
PCM (Powertrain Module) ဆိုသည်မှာ” ကားဦးနှောက် “(On board Computer) ကားကွန်ပျူတာ ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ကိုယ်ရေသုံး ကွန်ပျူတာများကဲ့သို့ပင် Software အသုံးပြုထားပြီး Upgrade ပြုလုပ်ခြင်း၊Reset ပြုလုပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
အဓိကအားဖြင့် PCM တွင်အင်ဂျင်နှင့် စွမ်းအားပို့ စနစ်များအတွက် Control Module များပါဝင်ပြီး အခြားသောသီးခြား Control Module များ (ဥပမာ ဘရိတ် ABS စနစ်၊ လုံခြုံရေး လေအိတ် Air bag , တံခါးဖွင့်၊ပိတ်စနစ် စသည်) နှင့်လည်း Communication Bus ကိုအသုံးပြု ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။
PCM ကို အင်ဂျင်ခန်းအတွင်း Dashboard နောက်တွင် အများအားဖြင့် တွေ့ရပြီး တစ်ချို့ကားများတွင် ထိုင်ခုံအောက်တွင် ထားရှိပါသည်။
PCM အတွက် Input များမှာ အမျိုးမျိုးသော အာရုံခံကိရိယာကပေးပို့သည့် Analog နှင့် Digital အချက်အလက်များဖြစ်ပြီး ရာနှင့်ချီ၍ ရှိနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ- Engine Speed, Coolant Temperature, Oxygen Sensor, Fuel Pressure, Throttle Position စသည်)
PCM ကထုတ်ပေးတဲ့ Output ကတော့ အင်ဂျင်ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နေစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ Analog and Digital Signal တွေထုတ်ပေးပြီး Relay တွေမှတစ်ဆင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ (ဥပမာ လိုအပ်တဲ့ လောင်စာဆီပမာဏ/ မီးပေါက်ရမည့် အချိန် စသည်. အရေးပါသည်. ထိန်းချုပ်မှု များအပြင် မိုးရွာပါက ၀ိုက်ဘာမိုတာ လည်စေခြင်း၊ ညအချိန် နောက်ကားမီးထိုးပါက နောက်ကြည့်မှန် အလိုအလျောက်မှိန်စေခြင်း၊ ကားဘီးလမ်းချော်ပါက ဘေးသို့ဆွဲရမ်းသွားခြင်းမရှိစေရန် ဘရိတ်စနစ်ကို ထိန်းကျောင်းပေးခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
PCM ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နေစေဖို့ အာရုံခံကိရိယာတွေအားလုံးနဲ့ PCM ကိုယ်တိုင် ကောင်းမွန်နေဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ အင်ဂျင်လုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေ အားလုံးကို ယာဉ်မောင်းရှေ့ ဒက်ရ်ှဘုတ် အောက် တစ်နေရာမှာ ရှိတဲ. Socket တွင် OBD (On Board Diagnose) Scanner ကိရိယာ တပ်ဆင်ပြီး မိမိကားအမျိုးအစား အလိုက် Software ရွေးချယ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ( အင်ဂျင်လည်ပတ်နှန်း၊ အပူချိန်၊ လောင် စာဆီ ဖိအား၊ မီးပေးချိန် စသည် ဖြင်. )
1995 ခုနှစ်နှင့် ရှေ့ပိုင်းထုတ်ကားများမှာ OBD1 ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး 1996 ခုနှစ်နှင့် နောက်ပိုင်းထုတ်ကားများမှာ OBD2ကို စံအဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။
OBD Scanner များမှာ လက်ကိုင် Code Reader (Scanner) များမှသည် အချက်အလက်အားလုံး ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့် Professional Scanner များအထိအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။
မိမိ ကွန်ပျူတာမှာ OBD2 Spy, Scanmaster, Dash Command အစရှိတဲ့ Software တစ်ခုတစ်ခုထည့်ပြီး OBD2 port နှင့် ချိတ်ဆက်၍လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကားကို ပုံမှန်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း Engine Check Light (ECL) လင်းလာပြီဆိုရင်တော့ ချွတ်ယွင်းမှု တစ်ခုခု ရှိနေပြီး OBD နှင့်စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါပြီ။
Scanner မှာဖော်ပြတဲ့ ချွတ်ယွင်းမှု Codes (P0171, P0300, P0455…စသည်) တွေကိုကြည့်ပြီး ပြုပြင်လဲလှယ်ရမည့် အစိတ်အပိုင်းကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ (PCM ကိုယ်တိုင်လဲ ချွတ်ယွင်းမှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။)
ပြုပြင်လဲလှယ်ခြင်း ကိစ္စပြီးပြီဆိုရင်တော့ Scanner နဲ့ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီး Error Code ကိုCancellation ပြုလုပ်ရပါမည်။ သို့မှသာ ECL မီးငြိမ်းသွားမှာပါ။
Scanner Tool များဟာဈေးကြီးပြီး စက်ပြင်ဆရာများသာ သုံးစွဲကြပါသည်။ အဆင့်မြင့် Scanner စက်တွေကတော့ ရန်ကုန်မြို့တွင် အလုပ်ရုံအနည်းငယ်မှာသာရှိပါသည်။
ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် ECL မီးလင်းလာပြီဆိုရင် Scanner များဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ မှန်းဆ ပြုပြင်ခြင်းမျိုးကို မပြုသင့်ပါ။ ပြုပြင်ရမည့် အချက်မှန်ကန်သည့်တိုင်အောင် Error မီးကတော့ ငြိမ်းသွားမှာ မဟုတ်ပါ။
ဈေးသက်သာပြီး အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုတင်ပြလိုပါသည်။
မိမိ၏ Mobile ဖုန်း (စမတ်ဖုန်း Android သို့မဟုတ် i-phone ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်) မှာ Torque ကဲ့သို့ အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ Software ကိုထည့်ပြီး OBD2 ECM 327 ပစ္စည်း နဲ့ Bluetoothသို့မဟုတ် Wifi အသုံးပြု ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းတန်ဖိုးက 12USD~40USD ခန့်သာရှိလို့ ဆောင်ထား သင်.ပါတယ်။
သို့သော် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါက အဆင့်မြင့် Scanner များရှိသော အလုပ်ရုံများတွင်သာ စစ်ဆေးပြုပြင်သင့်ပါကြောင်း အကြံပြုလိုပါသည်။
ဗဟုသုတ အလွန်ရတဲ့ ပိုစ့်မို့ ကျေးကျေးပါဗျ..
အပ္ပလီ ရှာကြည့်လိုက်တာ ..
ဒေါ်လှ ၅၀ တဲ့
တခြား ကောင်းတာလေးတေ ရှိရင် ညွှန်းပါဦးဗျာ..
Forget your iPhone,
Fly to Yangon with ANA business class,
Buyalow price Android phone,
Get any app and games FREEEEEEEE,
Back to Tokyo happily.
အဲ့ဒီ ဦးနှောက်တပ်ထားတဲ့ ကားတွေကို
မြန်မာမှာ ရှိသေးဘူးလို့ ကြားတယ် ..
ဟုတ်လားတော့ သိဘူး ..
ကြားဖူးတာ ပြောကြည့်ဒါဘာ ..
မန်းတလေးမှာ မိတ်အင် ဂျပန်ဆိုရင် သိန်း၅၀လောက်ရှိတယ်တဲ့
တရုတ်မိတ်က သိန်း၃၀ အောက် ပဲ ရှိတာတဲ့
အသိ ကားဝေါ့ရှော့ ဆရာတစ်ယောက်ကတော့ ဝယ်ပြီး သုံးတယ်ဆိုပဲ
မန်းတလေးက ကားဝေါ့ရှော့ဆရာတွေကိုတော့ ၊ အခုသွင်းနေတဲ့ ၂၀၀၀အထက် ကားတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် အားမရတာ အမှန်ပါပဲ
အသိတစ်ယောက် အမြန်လမ်းပေါ်မှာ ပန့် ပျက်သွားတာ.. နိုင်ငံထဲမှာဝယ်မရလို့ ယိုးဒယားလှမ်းမှာရလို့ကားကို လမ်းဘေးမှာ ၃ ရက်လောက် ထားခဲ့ရတယ်
အောက်ကစက်ကလေး.. ဈေးမှ $25.99 ပဲပေးရတယ်..
U480 OBD II Car Diagnostic Scanner helps to determine the cause of the check engine light or other dashboard indicators. Can help clear the code if it is just the vehicle’s computer acting up (please consultaprofessional before doing so). Will help figure out any trouble codes that may be resulting due to an odd noise or electrical flicker in the vehicle.
Inserted pictures are disappeared.